PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် × ဘယ်သူလဲ ? ဖေါ်လိုက်ပြီ အပိုင်း(၃)။
အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် × ဘယ်သူလဲ ? ဖေါ်လိုက်ပြီ အပိုင်း(၃)။
ဦးသိန်းစိန် (သမ္မတ) မှ တက်တက်လာခြင်း အပြောကောင်းကောင်း နွဲ့နွဲ့ကလေးဖြင့် ပြောချ လာလိုက်သည်မှာ ကောင်းမွန်သော အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ စကားလုံး မိန့်ခွန်းများအတွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ရှေ့နေကြီး ဦးသိန်းညွန့်မှ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လသည် နေပြည်တော်တွင်း အတွင်းကြိတ်ပုံး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွါး နေသာအခြေနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ တွင် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေငြာပြီး ကာလမှပင် ဖြစ်ပွားလာသော ကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြစ်ဦးသည် ၄င်း အတွင်းရေးမှုး(၁) နအဖတွင် လုပ်ခဲ့သောကာလတွင် မြစ်ဆုံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် တရုတ်ပြည်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ဒသမ ၆ ဘီလီယန် တန်ဘိုး ရင်းနှီး လုပ်ကိုင်နိုင်၇န် ကြားပွဲစားကြီး လုပ်ခဲ့သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ အား မြက်မြက်ကလေး အိပ်ထဲ ထည့်လိုက်သည့်အပြင် စာချုပ် စတင်ချုပ်ဆိုသော အချိန်တွင် ဧည့်သယ် ၀န်ဆောင်မှုစရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ အား တရုတ်ပြည်တွင် ကောင်စစ်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူနေသော ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သားမက် ကို ပေးခဲ့သည့် အတွက် ပြန်လည် လျော်ပေးရမည့် အခြေနေသို့
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ သင်္ကြန်ပြီးသွားသော ကာလ အစိုးရရုံးများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သောကာလတွင် ဒုသမ္မတ ၄င်၏ ဒုသမ္မတ အစိုးရရုံးဆိုင်ရာ ရုံးခန်းသို့ မလာတော့ပဲ မေလဆန်းတွင် နုတ်ထွက်စာ ပေးပို့ခဲ့၏။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမှ သင်္ကြန်အတက်နေ့တွင် ဦးသိန်းစိန်အား ခေါ်ယူကာ သြ၀ါဒပေးပြီး တရုတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ရှေ့တွင် အနှောက်ယှက်မရှိအောင် သယ်ဆောင်သွားရန်နှင့် လက်ရှိ တင်ရှိနေသော နိုင်ငံတကာအကြွေးများအား အကြေလည် အပြီးပြတ် ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်ဟု တာဝန် အပြီးပြတ်ယူခိုင်းသည်မှာ ဦးသိန်းစိန် ငြင်းချက် ထုတ်နိုင်ပါမည်လော။
ဦးသိန်းစိန်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သင်္ကြန်အတက်နေ့ အမိန့်အား ရင်ဝယ်ပိုက်ခဲ့၏။ သို့သော် မေလ ၅ ရက်တွင် ရေးသားသော The Guardian က အတိကျ ဦးတင်အောင်မြစ်ဦး နုတ်ထွက်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားခဲ့သော်ငြား သမ္မတရုံးမှ စင်္ကာပူတွင် ဆေးသွားကုနေသယောင် တရားဝင်မဟုတ်ပဲ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံလွင့်ခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းမှ အတည်ပြုပေးခဲ့၏။
၂၀၁၂ ဂျူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Network Myanmar ၀က်ဆိုက်တွင် ဦးအောင်သောင်းတို့၏ ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်သိန်းလင်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ထားသော အင်တာဗျူးတခုအား တရုတ် သတင်းထောက်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် zhang zhe and Ye Weimin ဇောင်ဇီ နှင့် ယီဝေမင် တို့က အချိန်ကိုက် ဖွင့်ချပေးခဲ့သည်။။ ဂျူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဦးသိန်းစိန်သည် တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီး နှင့် နောက်တကြိမ်သွားတွေ့ရပြန်၏။ တပ်ချုပ်ကြီးမှ “မင်းတို့ေ၇ွ့တာ အလွန်နှေးလွန်းလို့ အားလုံး သဘောထား ကွဲလွဲမယ့်ပုံမျိုးဖြစ်နေတာ” ဟု နောက်ဆုံး မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဦးသိန်းစ်ိန်မှာ တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီးဆီမှ ပြန်လာပြီး သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် တွင် အိုအိုင်စီ အဖွဲ့နှင် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ အပါဝင် တွေ့ဆုံပြီး ရန်ကုန်တွင် အိုအိုင်စီ ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ပေးရန် သဘောတူကြောင်း ပြောဆိုကာ ပထမအရစ် ထောက်ပံကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းအား ရယူလိုက်ကြသည်။ သို့သော် ထိုသတင်းအား မန္တလေး သံဃာထုအတွင်းသို့ ချက်ခြင်း ပို့လွတ်ခဲ့၏။ တဖက်မှလဲ ယူအန်မှ ပီချေးနံဘီးယားနှင့် ကင်တာနားတို့ နှစ်ဦးစလုံးအား မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ခွင့်ပြုထားပြီး ယူအန်၏ အထောက်ပံ့များကိုလဲ ယူထားခဲ့သည်။ (RFA August 10, 2012) (နောက်ပိုင်းတွင် အိုအိုင်စီလက်သယ်လုပ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုများအား သီးသန့်တင်ပြပေးပါမည်)။
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၀န်ကြီးဌာန အပြောင်းလဲနှင့် အသစ်ခန့်အပ်မှုများဖြင့် ရခိုင်ဒေသအထိကရုံန်းအား သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် အတော်မှားယွင်းပြီး တလွဲဗြောင်လိမ်နေသော ပြန်ကြားရေး ဌာနအတွက် နိုင်ငံတကာအားထပ်မံလှည့်စားပြပြီး ပြန်ကြားရေး ဦးကျော်ဆန်း အား နေ၇ာရွေ့ကာ ၀န်ကြီးဌာနပြောင်းပေးပြီး ဆက်ကစားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ၂၀၁၂ခုနှစ်သည် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့တခုလုံး နိုင်ငံတကာသို့ ခြေဆန့်သော ကာလဟုဆိုနိုင်ပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေအားပေးထားသောဂတိအတိုင်း နိုင်ငံတကာ အကြွေးပေါင်းစုံ ပယ်ပျက်ရေး အသဲသန် အားထုတ်ကြသော ကာလကြီး ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ရခိုင်နယ်စပ်တွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား အကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေသော ကာလဲဖြစ်၏။ ၁၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှလဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန် ဒီစီတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအား ပယ်ဖျက်ပေးရန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟယ်လာရီကလင်တန်အား တောင်းဆိုနေခဲ့ပြီး New York Time နှင့် Washington Post သတင်းစာ၏ ၁၉ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အကြီးကျယ်ရေးသားတင်ထားသည်။ ထိုနောက် ဦးသိန်းစိန်တို့ ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံကျော် လျော်ပစ်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်း တည့်သွားကြပြီး ၄င်းငွေအားလုံး ပြန်ဆပ်စရာမလိုတော့ပဲ ယနေ့ ဦးပိုင်အိတ်ထဲသို့ လျောကနဲ့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဦးအောင်သောင်း နှင့် အကျိုးတူ အစုရှယ်ယာပါဝင်ထားသော လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း၏သားတို့ လက်ဝါကြီးအုပ်ထားသည့် ဧရာရွှေဝါ ကုမ္မဏီ၊ ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော်မြို့နယ် ရှားခဲကြီး ကျေးရွာတွင် အင်းအလုပ်မားများ ဆန္ဒပြမှုများတွင် ကျုံပျော်အခြေစိုက် ခလရ ၃၆ လက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းမှ ၀ိုင်းရံပေးပြီး အထောင်ရဲစခန်းမှ ရဲများက ပစ်ခတ်ကာ အရပ်သား ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၅ ဦး သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဖြင့် ၄င်းတို့ အာဏာပိုင်ဆိုင်မှုသည် တရားဥပဒေအထက်တွင် ရှိကြောင်း အောင်သောင်းနှင့် အောင်သက်မန်း တို့မှ ထုတ်ပြခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီးဘရွှေ၏ သမီးနှင့် မြေးများမှ ရန်ကုန်မြို့ ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းတွင် ၇ှိသော ဗုဒ္ဒ ၀ိဟာရ မှန်ကျောင်းတော်၏ ရွှေသင်္ဃန်းကပ် ရေစက်ချပွဲတွင် ၄င်းတို့၏ဖခင် ကျမ်းမာစွာ ရှိပါကြောင်းအား သတင်းဌာနများသို့ တမင်တကာ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ဆိုလိုသည်မှာ ဆက်လက် ကြိုးကိုင်နေပါကြောင်းအား ဖေါ်ပြခြင်းတမျိုးဟု သတင်းလောကသားတို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
တဖက်မှလဲ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်တို့ အဖွဲ့သည် ကေအိုင်အေအား အပြီးပြတ်တိုက်ရန် ၀ပြည်သွေးစီးညီညွတ်ရေး မိုးဂုံန်းသို့ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်တွင် သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ မူးယစ်ဆေးဝါးပပြောက်ရေးဆွေးနွေးသယောင် သတင်းလွှင့်ခဲ့ပြီး လက်တွေ့ဆွေးနွေးမှုများတွင် ကေအိုင်အေအား အထောက်ပံ့ပေးခြင်း လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်ညှိနိုင်းခဲ့သော်လဲ ၀ဒေသခေါင်းဆောင်းများမှ မသေခြာမရေသော အဖြေသာရရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သန်း ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု ကတိပြုကာ လက်ဗလာဖြင့် ပြန်ခဲ့ရ၏။
သို့သော် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂဂါလီများမှ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် မင်းဗြား မြို့နယ်တွင် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နေအိမ်များအား မီးတင်ရှို့မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရခိုင်အမျိုးသားတို့မှ ကာကွယ်ရေးအစီစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရာ ၆ ဦးသေဆုံပြီး ၃၄ ယောက် စစ်တွေဆေးရုံသို့ ပိုခဲ့ရပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရဟန်းပျိုများက ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ကန့်ကွက်ရန် လမ်းပေါ်တက်လာကြသောအခါ အောက်တိုဘာ ၂၇ တွင် ဘင်္ဂလီများနေထိုင်သော ကျောက်ဖြူ ကမ်းနားရပ်ကွက်များအား စစ်တပ်ကပင် မီးတင်ရှို့ပေးပြီး ရခိုင်လူမျိုးများ သွားရောက်မီးရှို့ကြောင်း ဂျာနယ်အချို့တွင် ရေးသားခွင့်ပြုခဲ့၏။
ထိုသို့ဖြင့် ဘင်္ဂလီဘက်လှည့်လိုက် ရခိုင်ဘက်လှည့်လိုက် ဧ၇ာဝတီတိုင်းဘက် ပြသနာလုပ်လိုက်နှင့် နောက်ဆုံး ကချင်ဒေသ စခန်းသိမ်းပွဲများ ဆင်နွဲ၇န်ဦးအောင်မင်းတို့ ကာချုပ်နှင့် လက်ဝါးခြင်းရိုက်ကာ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာ ၂၉ တွင် လက်ပံတောင် မီးလောင်ဗုံး ဖေါက်ခွဲ ဖြိုခွင်း နှိမ်နှင်းပွဲကြီး ပြုလုပ်ပြပြီး သတင်းမီဒီယာအားလုံး လက်ပံတောင်း သို့ အားလုံး ဦးလှည့်သွားချိန်တွင် ကချင်ဒေသ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ပွဲကြီးနှင့် စစ်ပွဲကြီးအား အကြီးကျယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပနေတော့သည်။
အပိုင်း (၄)အား ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါဦးမည်။